Nanazava tamin'ny alàlan'ny Semalt ny rakitra
WebHarvy dia malaza . Manala ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala samihafa izy io ary mamonjy ny votoaty amin'ny endrika tsara. Amin'ny WebHarvy, azonao atao manangona angon-drakitra avy amin'ny tranonkala teknolojia, ny gazetiboky, ny fampahalalam-baovao, ny vavahadin-tserasera ary ny tranokala e-commerce. WebHarvy dia ahitana karazana fampivoarana maro izay ahafahantsika manangona angon-drakitra avy amin'ny toerana sarotra mora. Ny sasantsasany amin'ireo endrika tena manan-danja indrindra dia voafaritra etsy ambany.
1 - ruspa youtube. WebHarvy dia mamelatra sary sy horonan-tsary: ​​
Amin'ny WebHarvy, azonao atao ny mamoaka ny angona avy amin'ny sary tianao sy ny horonan-tsary. Ity fitaovana ity dia mamaritra voalohany ny toetran'ny sary iray ary manala azy araka ny zavatra takinao. Izy io dia mamerina indrindra ny fampahalalana avy amin'ny rakitra PNG sy JPG, fa afaka manaisotra ny angona avy amin'ny rakitra PDF.
2. WebHarvy dia manomana ny votoatin'ny tranonkalanao:
Ny endri-javatra hafa mampiavaka ny WebHarvy dia ny mamolavola ny votoatin'ny tranonkalanao ary manampy anao hamoaka izany avy hatrany. Mila mamefy sasantsasany vitsivitsy ihany ianao, ary ny WebHarvy dia haka ny votoatin'ny fiara sarotra ho an'ny fampiasana amin'ny aterineto. WebHarvy dia mety amin'ny olona tsy manana fahaiza-manao programa ary te-hanangana ny orinasany.
3. Mpandroba mahery vaika:
Tsy toy ny fitaovana maimaim-pahavaratra hafa ny WebHarvy dia manadino ny tranonkalanao ary manampy anao hanatsara ny fizotry ny fikarohana amin'ny tranonkalanao. Azonao atao koa ny mamorona endrika fampidirana amin'ny Internet sy ny endrika motera amin'ny alalan'ity fitaovana ity. Ankoatra izany, ny WebHarvy dia hikaroka teny fototra ho anao ary hanaparitaka ny angon-drakitrao raha tsy manelingelina ireo teny fanalahidy lava sy taila.
4. WebHarvy dia mamoaka ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala dynamique:
Ny ankamaroan'ny web scraper s dia tsy afaka manaisotra ireo angona avy amin'ny tranonkala dynamique ary mamela ny hadisoana maro amin'ny vokatra. Fa ny WebHarvy dia mamaha ny fahadisoana rehetra sy ny fahadisoana diso avy amin'ny vokatra. Manangona angon-drakitra avy amin'ny vohikalan'ny AJAX izy ary mamaky azy mivantana eo amin'ny fiara sarotra.
5. WebHarvy dia manondrana angon-drakitra amin'ny endrika samihafa:
Amin'ny WebHarvy, afaka mandefa ny data any Excel, CSV, XML, JSON, SQL Server, Oracle, MySQL ary OleDB. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia afaka mandefa ny data amin'ny Excel 2003 sy Excel 2007. Ny tahirin-kevitra dia hovonjena ho azy amin'ny endrika maniry.
6. WebHarvy dia manome fiarovana amin'ny spam:
Amin'ny WebHarvy, azonao atao ny miantoka ny filaminana sy ny fiainanao manokana amin'ny Internet. Ity fitaovana ity dia tsy manova ny angona avy amin'ireo tranonkala malaza ary manome fiarovana amin'ny spam tanteraka ho an'ireo mpampiasa azy.
7. Manorata fotoam-pandraketana amin'ny tranonkalanao:
Amin'ny WebHarvy, azonao atao ny mamolavola ny tranonkalanao amin'ny tranonkala ary afaka manapa-kevitra ny amin'ny hamaroan'ny pejy tianao hatao ao anatin'ny ora iray. Ity fitaovana ity dia afaka manangona pejy miisa 10.000 anatin'ny 30 minitra ary afaka manao tetikasa an-jatony amin'ny tranokala an-jatony isan'andro.
8. Deep Integration amin'ny API:
Ity fitaovana fandinganana tranonkala ity dia manana API misokatra, izay manampy amin'ny famoronana sy fanovana ny tetikasam-pandevonan-tranonkala mora mora. Azonao atao ny mampifanaraka ny votoatiny ary afaka mamolavola ireo angona amin'ny fampiasana API na API maro.
9. WebHarvy dia mamantatra angon-duplicate data:
Amin'ny WebHarvy, afaka mamantatra votoaty duplicate ianao ary afaka manala azy avy hatrany. Zava-dehibe ho an'ny tranonkala iray ny mamoaka votoatim-pahalalàna momba ny lalao fikarohana tsara kokoa. WebHarvy dia fitaovana maoderina izay mamantatra duplicate data ary mamaha azy avy hatrany, mahatonga ny asa mora ho anao.
10. WebHarvy - fitaovana iray mahafinaritra amin'ny SEO:
Amin'ny WebHarvy, azonao atao ny manakona ny angona avy amin'ny meta, sary, rohy anaty sy ivelany ary tag attributes. Soso-kevitra SEO izy io, izay manampy amin'ny fanatsarana ny lozam-pikarohana amin'ny tranokalanao.